Yaaliin ABO Itoophessuuf Godhame, Kutannoo Sabboontotaan Fashale!
Date: February 26, 2012Author: Oromedia 1 Comment
(Oromedia, 26 Guraandhala 2012) Tarkaanfiin murni polotikaa Oromoo kan dhaaba siyaasaa Ginboot 7 jedhamu waliin hiriiree Itoophiyaa dimokiraatessuuf socho’aa jiru, ilmaan Oromoo biratti fudhatama dhabee akka jiru qorannoon tokko mul’ise.
Qorannoon garee “Oromia First’ jedhamuun gaggeeffame akka ifa godhetti, qorannoo kallattii fi ala kallattiin Oromiyaa fi addunyaa keessatti gaggeeffameen Oromooti hedduun tarkaanfii murni maqaa ABOtiin of-waamee warra Ginboot 7tti jedhamutti dabalame fudhatama hin qabu.
“Oromoon dhibdee Gaanfa Afrikaa hiikuu keessatti qooda guddaa kan gumaachu ta’u illee, dhibdee Gaanfa Afrikaa hiikuuf gaaffii siyaasaa fi mirga Oromoo ukkaamsuun yookaan gara dabarsuun dhibdee san caalatti kan jabeessu ta’uu kan hubate,” gareen “Oromia First” jedhamu kun, itti dabaluunis, “haala yaaddessaa naannoo Gaanfa Afrikaa keessatti mul’achaa jiru furuuf humnooti siyaasaa walamantaa fi walakabajaan waliin hojjachuu akka qaban yaada dhiyeessee jira.
Keessaayyuu, hojii fakkeessaadhaan hundeen dhibdee akka hin furamne seenaa irraa hubachuun barbaachisaa ta’uu kan eere, gareen qorannoo gaggeesse kun, akka fakkeenyaattis, shiroota mootummaa Minilikii haga mootummaa Wayyaaneetti dalagamaniin dhindeen Gaanfa Afrikaa dana walxaxaa ta’aa akka dhufe hubachiisee jira.
Dhibdee walxaxaa dhufe kanaaf, maddi akkaataa dhibdee san itti qabanii fi itti hiikan ta’uu kan ibse qorannoon kun, shirri humna Goobanaatiin Oromoo dhuunfachuuf godhame haala amma mul’ataa jiruuf hundee ta’ee jira jedheera.
Waggaa digdama duras seenaan kun deebisee of haaromsuun kan deebi’ee mul’ate ta’uu kan akeeke, Qorannoon kun, mootummaa Wayyaanees akkuma abbbootii isaa shiraan Oromiyaa cabsuuf humna OPDOtti gargaaramuu ibsee, yeroof kan milkaa’e fakkaatus, garuu dhibdee Gaanfa Afrikaa daran akka walxaxu godhuu isaa ifa godhee jira.
Humnooti akka Ginbooti 7s yeroo ammaa kanatti gochaa walfakkaataa irra deebi’anii hojjachaa akka jiran kan ibse Qorannoon kun, naannoftuun dhibdee kun akka furamuuf dhaabota siyaasaa dhugaa fi haqaaf hojjatan waliin walamantaa fi walkabajaan waan waliin galan irratti gamtaan hojjachuu malee namoota caasaa fi sirna jaarmiyaa tokkoo seeraan ala fudhatanii ittiin qoosaniin adeemuun dhibdee Gaanfa Afrikaaf furmaata hin kennu jedhee jira.
Qorannoon gidduu kan ifa godhame irraa akka hubatametti, sadarkaa addunyaatti namoota akka tasaa gaaffiiileen dhiyaateef 250 keessaa 245 tarkaanfii murni kanaan dura JIJJIIRAMA ofiin jechaa bahee, booda keessa immoo ABO jedhe Ginboota 7 tti dabalame mormanii jiru.
“Sababni isaan mormaniifis, tokkoffaa morni kun Oromiyaa dhiiga gootota hedduun ijaaramte, deebisanii garbummaaf dhiyeessan kan jedhu dha.
Itti bahi qorannoo kanaa akka hubachiisutti, dhaaba eenyummaa fi aangoo saba Oromoo deebisuuf qabsootti jiru, ABO diiganii humna Impaayira dullattii deebisee ijaaru keessatti hojjatu taasisuuf yaaliin godhamaa ture, akkuma duulota kanaan duraatti fashalee jira.
Jalqaba bara 2012 irraa eegalee murni maqaa ABOtiin ka’ee, sagantaa ABO seeraan ala jijjiiree humnoota siyaasaa Itoophiyaatti makamuu isaa ibse kun, qaamota hawaasaa fi jaarmiyoota mirga Oromoof falman maraan balaaleffatamaa akka jiru beekamaadha.
Previous Previous post: Breaking a promise of Silence
Next Next post: Qeerroon Faaruu Warraaqsaan Tumsame
One thought on “Yaaliin ABO Itoophessuuf Godhame, Kutannoo Sabboontotaan Fashale!”
No negotiation natural identity